आँखाको रंग र व्यक्तिको चरित्र हो, निस्सन्देह, फरक कुराहरू। तर तिनीहरूबीच एक निश्चित जडान स्पष्ट छ। यो वा आँखाको रङका स्वामीहरू तिनीहरूको क्यारेक्टरमा समान विशेषताहरू छन्। यसकारण, आँखाको रंग अनुसार अनुकूलता वर्णहरूको अनुकूलता द्वारा निर्धारण गरिन्छ। खैर, पढ्न सुरु गरौं ...
आँखा र क्यारेक्टरको रंग
आँखाको रंगमा मान्छेको अनुकूलताको बारेमा कुरा गर्नु अघि, यो सामान्य वाणी लक्षणहरू विचार गर्न आवश्यक छ जुन यो वा आ आँखाको रंगमा निहित छ।
आफैलाई हेर्नको लागि, केवल भूरा-आँखाको चेहरा हेर्नुहोस्। भूरी आँखाले मानिसलाई बुद्धिमानी बनाउँछ, धेरै सजिलो हुन्छ, भावनात्मक। साथै, भूरी आँखा भएका व्यक्तिहरू सुन्दर तातो-स्वाद भएका छन्, सधैं तिनीहरूले के चाहिन्छ भनेर पाउँछन्। हल्का भूरी आँखाका स्वामीहरू त्यस्ता गुणहरूमा निष्ठा, विश्वसनीयता, लगनशीलता र सपनापनको रूपमा निहित हुन्छन्।
हरित आँखा भएका मानिसहरू सीधा, धेरै ईर्ष्या, चालाक, मूलभूत र वर्गीकृत छन्। उच्च स्वभाव हो, धेरै भावुक व्यक्ति।
क्व्याड-हरी आँखाका मालिकहरू धेरै रचनात्मक व्यक्ति हुन्, जिम्मेवार, भावुक र कमजोर। हृदयमा घटनाहरू बुझ्न इच्छुक छन्, निराशामा झुन्डिएका छन्।
खैरो हरा हरियो व्यक्तिहरूले उद्देश्यपूर्णता, बलियो इच्छा, क्रूरता र अन्तर्वार्ताको अभिव्यक्तिको रूपमा यस्ता गुणहरूद्वारा विशेषता हुन्छन्।
डार्क-ग्रे आँखाले आफ्नो मालिक साहसी, द्रुत स्वभाव र vindictiveness, उत्तेजना र परिणाम मा एक फोकस संग भेदभाव।
ब्लू-आँखा भएका व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मकता, प्रतिपक्ष, मूड स्विंग र भित्रीपनको विशेषता हुन्।
यसकारण, आँखाको रङ बीचको जडानलाई अस्वीकार गर्न र व्यक्तिको क्यारेक्टर गलत हुनेछ। तथापि, आफ्नो आँखाको रंगले एक व्यक्तिको बारेमा हाम्रो निर्णय धेरै गलत हुन सक्छ।
कसले र के गर्न सक्दछन्? ..
मानिसहरू भेट्छन्, मानिसहरू प्रेममा हुन्छन्, विवाहित हुन्छन् ... सबैले व्यक्तिगत व्यक्तिगत मापदण्डको लागि जीवन साझेदार छनौट गर्दछ - कोहीको लागि, सुन्दरता महत्त्वपूर्ण छ, अर्को दिमागको लागि, र अझै अरू अरू आँखाको रंगको अनुसार अनुकूलता अध्ययन गर्दछ। खै, त्यो हुन्छ।
खैरो र हरा, खैरो हरा हरियो - संगतता
उस्तै टिन्डेममा खैरो र हरा आँखाको यौन अनुकूलतालाई विशेष गरी सफल हुनेछ। दुबै साझेदारहरूले पर्याप्त स्वभाव, संवेदनशीलता र एक-अर्कालाई जिम्मेवारीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। धेरै मामिलामा सफलतापूर्वक एकअर्कालाई पूरै, एक लामो र सुखी विवाहको लागि सबै मौकाहरू छन्।
ब्राउन र नीलो आँखा - संगतता
साझेदारहरूको यौन अनुकूलता अस्थिरता र हितको फरक छ। भूरी आँखाले मानिसलाई नीलो-आँखाको साथीको अनैतिकता र असक्षम पार्न सक्छ। पहिलेको भावना, संचारको आवश्यकता छ, जब नीलो आँखाले बादलहरूमा घुमाइरहेछ र सपनामा लिप्त हुन्छ। छोटो र धेरै सफल गठबन्धन।
नीलो र हरा आँखा - संगतता
हरियो आँखाको ईर्ष्या मनपर्ने मनपर्ने र खुल्ला नीलो आँखाको साथीको संरक्षणको लागी मनपर्छ। एकै समयमा, पछि रिश्तेमा अत्यधिक भावनात्मकता देखाउन आवश्यक छैन। उनीहरूको चलनमा, तिनीहरू एकअर्काको पूरै पूरै पूरै हुन्छन्।
नीलो र खैरो आँखाहरू - संगतता
संघ संदिग्ध छ, तर तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि, अनुकूलता एक साझेदारको हल्का खैरो आँखा राम्रो हुनेछ। अन्यथा, कालो खैरो आँखाको मालिकले कमजोर-इच्छाएको नीलो आँखाको साथीको सम्बन्धमा अत्याचार देखाउन सक्छ। दबाव र कठोरता पछि पछि मन परेन। निलो आँखा, विपरीत सेक्स संग संगतता को मामला मा, उपज को लागि तयार हुनु पर्छ र अधिक "पार्थिव" चरित्र को प्रदर्शन को प्रयास गर्नु पर्छ। सबै होइन बादलहरु मा उडान गर्न को लागि समय! ..
यौन र मनोवैज्ञानिक अनुकूलताको सन्दर्भमा, हरियो र भूरी आँखाहरू, अझ ठीक छ, तिनीहरूको मालिकको गुणस्तरको कारणले तिनीहरूको मालिकले धेरै फाइदाहरू छन्। सामाजिकता र आत्मविश्वास, करिश्मा र बुद्धि सधैं आकर्षित र यस्तो व्यक्तिको नजिक हुन चाहने कारण हो।
जुन तपाईंको आँखाको रंग हो, चरित्र सँधै समायोजनको लागि उत्तरदायी छ, चाहे वांछित हुन्छ। हो, त्यहाँ भन्न, आँखाको रंग पनि रंगीन लेंस उठाएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संसारलाई "अन्य आँखाको साथ" हेर्न चाहानुहुन्छ - आफैलाई यो सानो पुर्खा र प्रयोग अनुमति दिनुहोस्।
हरियो आँखाको लागि दिनको मेकअप अप
हेडी क्लम - जीवनी
चिकन पिट - नुस्खा
युवा शैली - फैशनेबल लुगाहरू, जूता र सहायक उपकरणहरू
वजन घटाने को लागि भूखंड - परिणाम
वेटिकन मा सिस्टाइन चैपल
नवजातमा ओवल विंडो खोल्नुहोस्
Polyurethane छत कुखुराहरू
गर्भवती महिलाहरू बिरालोले किन डराउँदैनन्?
गर्भवती महिलाहरु को लागि swimsuits - आशाजनक आमाहरु को लागि सबै भन्दा आरामदायक र सुन्दर मोडेल
घर मा arrhythmia कसरी आक्रमण हटाउन?
एरी विरासत: विक्टोरियन युगबाट उत्तेजना फोटोहरू
घरको लागि ग्याँस जनरेटर
कसरी एक राम्रो गृहिणी र पत्नी बन्न?
समुद्र तट टोपी
चाय सेट - चेक चीनी मिट्टी को बरतन
हलवनका लागि ओटोम्यान्स